Mbola misy antony bebe kokoa aza hialana amin'ny Birao Libre | Avy amin'ny Linux
Patrick Bustos | | fampiharana
Ao amin'ny lahatsoratra mahafinaritra nosoratany Andao hampiasa Linux antsoina hoe Ahoana ny fanamorana ny fifandimbiasana avy amin'ny MS Office mankany LibreOffice Afaka nahita antony vitsivitsy izahay fa tsara ny mifamadika amin'ny LibreOffice, fa ny marina dia misy antony iray sy arivo hafa hivadihana amin'ity voninahitra ity - tsy manitatra aho.
Fampitandremana: ity lahatsoratra ity dia natokana ho anao, olon-tsotra izay tsy maintsy mandany ny andronao amin'ny fampiasana Windows ary ho anao, tanora nerd izay, na dia eo aza ny tenanao, dia tsy maintsy mametraka MS Office amin'ireo olona ao amin'ny fianakavianao izay mampiasa Windows satria io no napetraka.
Adihevitra enina tsara hivadika ho Libre Office
1- Mpampiasa interface tsara kokoa:
Hatramin'ny naha kely antsika dia nianatra nampiasa Word tamin'ny fomba iray izahay, saingy tamin'ny 2007 dia nanapa-kevitra ny hampihatra ilay interface i Microsoft kofehy izay manome fizarana hatsarana milamina kokoa, fa tena fanatsarana tokoa? izany hoe amin'ny ankapobeny, ny rindranasa rehetra dia mampiasa bara fisakafoanana misy zavatra sasany (toy ny File, Edit, View, sns.) Fa maninona no MS Office? Nahoana izy ireo no mamiravira antsika hiala amin'ny fampiononantsika? Misaotra indrindra fa ny LibreOffice dia mifikitra amin'ny fahatsapana mahazatra rehefa mamorona interface sy manome antsika iray izay tsy mila tapa-bolana vao zatra.
2- Sorohinay ny tsy ara-dalàna (piraty):
Aleo milaza ny marina, any Amerika Latina dia tsy zatra mandoa vola amin'ny MS Office amin'ny ankapobeny. Raha ny tena izy - miaraka amin'ny LibreOffice - isika dia tsy misoroka ny tsy ara-dalàna (very amin'ny lalan'ny heloka bevava), fa misoroka ihany koa isika mpangalatra teknisiana hametraka ny biraon'ny piraty (satria ny fanaovana piraty dia mety ho sarotra kokoa noho ny mahazatra ary amin'ny farany dia lafo ny volontsika amin'ny volon'ondry)
3- Mety tsara kokoa:
Ity teboka ity dia - angamba - azo iadian-kevitra kely satria miankina bebe kokoa amin'ny sehatra ampiasantsika azy io, fa ny tena marina dia ny rindrambaiko izay tsy mila voajirika hiasa dia hiasa tsara kokoa noho ny fametrahana tsy ara-dalàna satria tsy mila mikasika fotsiny ianao na adala snss, na ireo adala fisoratana anarana na fisie fikirakirana hafa na toy izany.
4- Fanohanana ara-teknika tsara kokoa:
Ny fananana rindrambaiko malalaka sy loharano misokatra dia misy vondron'olona mpanohana matanjaka. Izany hoe, na dia ao amin'ny MS aza izy ireo dia mandany fotoana hamoronana boky amin'ny fiteny rehetra izay misy ny vahaolana rehetra mety hitranga amin'ny olana rehetra mitranga, eo amin'ny fiarahamonina izany rehetra izany dia atao amin'ny fotoana tena izy na efa vitan'ny izay – amin'ny ankapobeny– ny vahaolana dia mety ho tonga haingana kokoa.
5 - Fahafahana manampy:
Amin'ny maha loharano misokatra antsika dia manana ny tena mety hiaraha-miasa hanatsara ny suite. Ohatra, isika dia afaka manampy amin'ny antontan-taratasy, tatitra momba ny lesoka, manome sosokevitra fanovana eo amin'ny sehatry ny sary sns.
6 - Tsy misy crapware: Ity dia teboka hafa iray hafa fa ny marina dia rehefa mametraka MSOffice isika dia afaka mametraka (raha tsy mitandrina) zavatra maro izay tsy ilaintsika na tsy hampiasaintsika akory, toy ny Access, Outlook, Onenote, sns, satria ny marina amin'ny ankamaroan'ny fotoana, Word, Excel ary PowerPoint ihany no ilaintsika.
Na izany na tsy izany, mino aho fa rehefa mitory ny filazantsara dia tsy manome ny hevitra tsara indrindra foana isika, koa antenaiko fa ireo izay hasiako tsipiriany eto dia ho an'ireo mpampiasa MSOffice izay tsy vitan'ny misy safidy hafa maimaim-poana fa misy koa fomba fiasa tsara kokoa. Mahafantatra tohan-kevitra hafa ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Mbola misy antony bebe kokoa aza hialana amin'ny Birao Libre
Ny marina dia tiako ny mampiasa Libre Office, saingy heveriko fa tsy mitombina ny ankamaroan'ny tohan-kevitrareo afa-tsy ny ampahany amin'ny rindrambaiko piraty.
Ny biraon'ny Microsoft dia mihoatra lavitra ny Libre Office / Open Office amin'ny ankamaroan'ny faritra ao aminy, azo atao ny milaza fa ny hany ananan'ny birao malalaka dia ambony noho ny Microsoft office dia ny fahazoan-dàlana.
Misaotra anao namonjy ahy ny olana amin'ny fandavana ny HEVITRA an'ny olona nanoratra ity ranting manokana ity izay mahatonga ny rano hatraiza hatraiza.
Tsy mitovy hevitra aminao aho.
Mampiasa birao maimaim-poana aho satria tiako izany, ary ny tena manintona ahy indrindra dia ny fahazoan-dàlana, satria raha te-hamaky M. Office ao anatin'ny iray minitra aho ary tsy raharahako na mahazo vola na tsia ilay multimillionaire Bil Gates.
David andrade dia hoy izy:
Hala izany malote izany!
Valiny tamin'i David Andrade
Heveriko fa tsy ratsy aho, tsy mpisolovava momba ny zon'ny mpamorona Microsoft fotsiny aho.
Miala tsiny, fa tsy miombon-kevitra amin'ny fanontaniana hoe iza no tsara kokoa ary aleoko kokoa ny mpanoratra ny lahatsoratra. Marina fa ny MSOffice dia feno kokoa ary manana safidy betsaka kokoa, fa ho an'ny 95% ny olona maty dia be loatra ny Office Libre. Omeko fanoharana ianao: inona no tsara kokoa amin'ny Audi A6 na Ford Fiesta? Raha ny lojika, ny voalohany dia mirentirenty kokoa, mihazakazaka bebe kokoa sns, fa raha tianao ny handeha hiasa fotsiny fa tsy manana antily an-tapitrisany ianao, ny faharoa dia safidy tsara kokoa. Toy izany koa no mitranga amin'ireo programa, mampiasa Office Libre amin'ny zavatra rehetra miasa isika, tena faly izahay, ary maimaim-poana ihany koa, saingy heveriko fa amin'ny asa manokana sasany dia tena ilaina tokoa ny MSOffice.
Etsy ankilany, ny Office Libre dia ampitahaina amin'ny zavatra ataon'ny MSOffice hatrany, saingy vitsy ny manao azy mifanohitra amin'izay, izany hoe: Ny sehatra ivoho MS Office, mahavita mamehy tsara ny endrika antontan-taratasy Libre Office ve izy ireo, manavao azy maimaim-poana, sns. Sns ? Miaraka amin'ireo teboka ireo amin'ny latabatra fampitahana dia niova kely ny valiny.
chechi dia hoy izy:
Inona ary no hataonao amin'ny dia, miaraka amin'ny Audi A6 na Ford Fiesta? Mazava ho azy, miaraka amin'ny Audi A6 🙂
Toy izany koa no mitranga amiko: LibreOffice ho an'ny zavatra tsotra, ary MSOffice ho an'ny zavatra matotra. Tsy haiko, fa na dia tena Linux aza aho, tsy sarotra amiko ny mamantatra ireo zavatra tsara, ary MSOffice no birao fiasa tsara indrindra mandraka ankehitriny.
Mamaly an'i chechi
Raha ny fahitako azy dia tena subjectif indrindra indrindra ilay point # 1 «Mpampiasa tsara kokoa» alohan'iza na inona? Ahoana raha tiako ny interface Ribbon?
Naveriny ho an'ny "Antony itiavako an'i Libreoffice" ilay Paositra, fa mieritreritra samirery ny tsirairay avy isika.
Prince_Jun dia hoy izy:
Tena teboka iray voalohany ary, ambonin'izany rehetra izany, ny fahatelo. Tsy mbola mila mihodina amin'ny rezistra na sns aho mba hampandeha azy; mainka fa ny an'ny "hacks".
Amin'ny interface, tsara ... miandry taona vitsivitsy fotsiny. Ny zanaky ny anio, ny olon-dehibe rahampitso. Ka ny hoe "nihalehibe interface tsara izahay ary izany no antony tsy ahafahantsika miova" dia tsy hisy dikany intsony, tsotra izao satria efa hisy taranaka iray izay hitombo miaraka amin'ny fantsom-pitaovana. Na izany aza, ekeko io hevitra io fa tsy ny fivoarany, izany hoe mino aho fa ny iray amin'ireo antony itiavanao hampiasa LO dia ny interface interface, satria tsy zatra Ribbon ianao; saingy tsy mahatonga azy io ho "tsara kokoa".
Amin'ny teboka sisa, manaiky tanteraka aho. Mazava ho azy, afaka nianiana aho fa satria tsy fantatro-ny dikanteny firy azonao atao ny misafidy izay programa hapetraka ao amin'ilay suite, tsy misy fanampiny tsy ilaina.
Mamaly an'i Prince_Jun
GalaxyLJGD dia hoy izy:
Ny marina dia mizara ny ankamaroan'ny teboka aho fa ny interface dia tsy, miaraka amin'ny ribbon dia hitako mora foana izay rehetra ilaiko satria ny zavatra tsirairay dia nanana ny menio nalamina tsara sy miaraka amin'ireo sary masina izay azo takarina amin'ny voalohany, voalohany. fa mampiasa LibreOffice aho hanao asa an-tsekoly, rehefa hitako ilay interface dia novonoiko ny solosaina (Hatramin'ny nampiasako ny Ubuntu) ary nandeha tany amin'ny Windows aho mba hampiasa Microsoft Office, noho ny tsy fahombiazako tamin'izany fotoana izany dia voafafa daholo ny lahatahiry lahatahiry Office tsy misy antony ary tsy afaka nametraka azy io indray aho, tsy afaka mametraka LibreOffice koa ka amin'ny Linux ihany no ampiasaiko.
Amin'izao fotoana izao ny LibreOffice dia toa tsy dia ratsy tarehy loatra amiko fa tiako ny marina fa misy lohahevitra ho an'ny LibreOffice izay mitovy amin'ny kofehy mba ahazoana aina kokoa na misy safidy 2 hisafidianana ny interface rehefa ampiasaina amin'ny voalohany, ny iray ho an'ny ankehitriny ary hafa ho an'ny kofehy.
Mamaly an'i GalaxyLJGD
TENA mifanaraka amin'ny fijerinao ny lohahevitra. Ny mahaliana ny olombelona tsotra dia ny hoe tsara kokoa sy afaka ara-dalàna izy io.
Patrick Bustos dia hoy izy:
Heveriko fa ny Libre Office no vahaolana mety indrindra ho an'ny olon-tsotra tsy mila zavatra midadasika toa ny MS Office fa zavatra tsy mandany vola ary mandeha tsara.
Valiny tamin'i Patricio Bustos
Pablo Ivan Correa dia hoy izy:
Manana adihevitra mavesatra ho ahy aho: LibreOffice dia manana fivoarana karazana rindrambaiko maimaimpoana ary mamela malalaka ny fahalalana, sa tsy izany? Vonona! Izany no adihevitra izay mavesatra indrindra amiko, satria fivoarana iray izay misy ny fitondran-tena sy manjaka ny etika. Fiarahabana avy amin'i Loja (Ekoatera).
Valiny tamin'i Pablo Ivan Correa
juanperez dia hoy izy:
Ribbon no noforonin'i Microsoft tsara indrindra, ny Office no tsara indrindra amin'ny automatisation birao, saingy tsy mandeha amin'ny Linux izany. Manantena aho fa tsy hanome aingam-panahy ny "FORK" fa hanao izay anao manokana; ny toe-tsaina dia ny fusion. Mampandroso azy io, eny, saingy haingana kokoa no anaovan'ny Microsoft azy.
Ny hany antony hiverenako amin'ny Microsoft OS sasany dia ny hametahana azy io amin'ny * nix. Alao an-tsaina ny W10 ao amin'ny Freebsd.
Mamaly an'i juanperez
Ary tsy mizara izany aho, satria ny tsiroko dia maka toerana be dia be i Ritbon ary mameno ahy sary masina izay tsy ampiasaiko. manafina fiasa maro koa izy io, izay tsy maintsy atao famotorana hahalalana hoe aiza izy ireo.
Avy amin'ny birao Libre dia azonao atao ny manokatra ny rakitra MS na dia tsy izany aza. Ary matetika dia fitarainana iraisana fa ny rindrambaiko maimaimpoana dia "mamindra" ireo sary, latabatra sns sns izay nisy azy ireo tany am-boalohany, na dia tsy dia miha-kely aza ny zava-mitranga, amin'ny ankapobeny dia mitranga izany noho ny tsy fahampian'ny fahazarana mampiasa ny pejy tapaka, na manamboatra ny latabatra sy sary na aiza na aiza no itiavanao azy ireo.
Antony iray hafa koa ny fironana vaovao amin'ny fomba fahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny MSx vaovao, amam-bolana? ekipa? isan-taona? adala, raha ny fiheverako am-panetren-tena dia tsy miankina fotsiny ny fiankinan-doha, azoko tsara ny anton'orinasa saingy manomboka amin'izany dia handoa vola mandritra ny volana maro ny firmware an'ny mpanontao dia misy dingana iray ihany.
Etsy ankilany, tsy hanandrana hanome antony hafa aho hoe aiza no tsara kokoa rehefa miasa adiny 2 misesy ary iza amin'izy ireo no nahitam-bokatra kokoa, satria raha manome hevitra matotra dia tokony hanana "sidina" mitovy ora "an'ny rafitra roa.
Ny rindrambaiko maimaimpoana dia tokony ho marina, ara-pitondrantena ary etika.
Tsy ity lahatsoratra ity. Miala tsiny fa fanangonan-dainga io, ary fahamarinana antsasaky ny famafazana ny mpampiasa rindrambaiko maimaimpoana rehetra.
Salama! Marina ny teninao amin'ny zavatra rehetra lazainao, saingy tsy maintsy takatrao fa sarotra kokoa noho ny toa ny fanaovana lahatsoratra marina tsy misy lainga sy raha fahamarinana feno. Tena hanao izay fara heriko aho hanoratako etika sy fitondran-tena tsy misy kilema izay hahatonga ny vondron'olona rindrambaiko maimaimpoana hibontsina tsara.
Inona no troll tsy fantatra anarana
Heveriko fa ny ankamaroan'ny teboka dia tena mifandraika, afa-tsy ny piraty, crapware ary ny fanohanana ara-teknika, ny ambiny dia araka ny fijerinao azy, ny interface no kely indrindra amin'izany, raha tiako kokoa ny libreoffice, fa ny taranaka Androany ianao dia hampiasaina amin'ny kofehy, ary ny mety fanampiana dia tsara fa ny ankamaroan'ny olona mety tsy liana, te-hanitsy ny antontan-taratasiny sy voila fotsiny izy ireo
Araka ny fantatsika, misy fitsipika iray izay tsy tokony hihoarana ny iray segondra rehefa manindry isika mandra-pisehon'ny data eo amin'ny efijery, mba tsy hitranga ilay antsoina hoe "dispersion mentale". Raha mihoatra ny folo segaondra dia efa "any an-kafa" ny saintsika. Manana LibreOffice napetraka amin'ny sehatra maro aho (Linux, Windows XP, Windows 7) ary, ny marina dia mety tsy hahatratra 10 segondra izy io, fa hatramin'ny fotoana tsindrio ny antontan-taratasy iray mandra-pisokafany dia maharitra mandrakizay izany. Amin'ity MS Office ity dia mandresy amin'ny fihotsahan'ny tany.
Raha ny interface no resahina dia toa tsy mamokatra loatra amiko ny Ribbon. Na inona na inona tsiro, ny isan'ny tsindry hahatratra ilay tranokala mitovy dia ampitomboina hatramin'ny telo raha ny momba ny interface LibreOffice na ilay interface MS Office taloha ihany. Miasa isan'andro miaraka amina mpamaky teny aho ary, ny marina, lasa mamoy fo izy amin'ny farany.
MS Office miasa haingana ho ahy, fa indraindray misokatra miadana ihany koa izy, ary ny olana dia tsy haiko na ny birao io, PC-ko sa virus io.
Ny olana dia ny Access sy ireo orinasa kely miasa amin'io sehatra io. Raha vantany vao misy fomba iray avela handao ireo tahiry mitovy amin'ny Libreoffice dia hitombo ny fifindra-monina. Amin'ny asako dia mampiasa fotodrafitrasa tsotra izahay ary ny olana dia… Ny fananganana azy amin'ny rangotra dia mandany fotoana sy lafo.
Fertango dia hoy izy:
Tena marina, nanana an'io olana io aho, fandaharana mikraoba maro tao Acces, ary Libre no namela azy ireo teny an-dalana.
Valiny tamin'i Fertango
Mpankafy rindrambaiko Maimaimpoana aho, ary noho izany, an'ny Libreoffice. Ity tetik'asa Office Suite mahafinaritra ity dia vatosoa lehibe, izay nandraisako ny anjara birikiko kely aza.
Saingy manomboka eo ka lasa safidy hafa amin'ny MSOffice dia mbola chimera ihany io.
Izay rehetra niasa tamim-pahamendrehana, namorona antontan-taratasy lava be misy sary, latabatra ary tohiny, dia hanamarina ireo fetra mbola misy ao Libreoffice.
Ity lahatsoratra ity dia tsy manome ahy singa kendrena hampitahana, ny mifanohitra amin'izay kosa dia subjectif.
Raha dinihina tokoa, MSOffice dia tsy mila atao piraty, novidiana tsotra fotsiny, toa ny sasany tamintsika izay nividy solosaina ary tsy "nanao piraty" azy, ny rindranasa tompony dia tsy fahotana, ary tsy ny devoly koa. Safidy iray hafa fotsiny io rehefa mampiasa rindrambaiko.
Ny hacking dia tsy demonia koa, raha ny tena izy ny Microsoft MSOffice izay tokony hampiasaiko amin'ny format pptx dia tsy mitondra kompleksitra piraty amiko satria ampihimamba tokana io.
pepe2 dia hoy izy:
"Mila mampiasa adidy aho" misy ny fanontaniana, hoy ianao amin'ny tenanao, amin'ny adidy, ary ny tena marina dia tsy misy olona voatery terena. Hiteny aho fa ny 90% n'ny mpampiasa Microsoft Office dia tsy mampiasa 100% ny hatsaram-panahin'io rindrambaiko io, ny ankamaroany dia mampiasa teny iray hanoratana naoty na seminera mahazatra, sns. Ho an'izay, avy eo mampiasa Libreoffice aho. Apetrako izy ary voila, tsy misy triatra, na raha raisin'ny antivivrus ho viriosy izany, na miandry ny hijerena raha mivoaka ilay kinova farany, ary tsy misy an'io hadalana io. Mametraka azy ny Libreoffice, ampiasainao izany ary zavatra hafa, tsy mandany fotoana.
Mamaly an'i pepe2
Ny antony lehibe Pepe2, ny zava-mitranga amin'ny tranga misy ahy dia ny hoe tsy tokony hampiasa ny pptx format aho fa tsy hampiasa azy io.
Christian Reyes dia hoy izy:
Mihevitra aho fa tsy misy fampitahana, na dia samy suite aza ny birao, samy manana tanjona samy hafa ny tsirairay.
LibreOffice dia tetikasa tohanan'ny The Document Foundation, fototra tsy mitady tombom-barotra. Raha ny MS Office dia efitrano iray an'ny Microsoft, efitrano rindrambaiko manerantany saika ampihimamba.
Raha ny ezaky ny TDF dia mifantoka amin'ny fitondrana ny fenitry ny antontan-taratasy elektronika amin'ny ambaratonga goavambe ary miaro ny filozofia openource; ao amin'ny MS ny vokatra vokariny dia lasa tsy dia manara-penitra ary mihamaro ny fananana.
Ny fahasamihafana ifotony dia miankina amin'ny FREEDOM, ny lafiny hafa dia faharoa.
Amin'ny farany dia mbola manontany ihany hoe maniry fahalalahana ve ianao sa tsia? Eny, avy eo misafidy LibreOffice. Tsia, ampiasao hatrany ny MS Office.
Valiny tamin'i Crhistian Reyes
Tiako ny Linux, mpampiasa mahatoky azy aho ary tiako ny tombony azony, tetik'asa lehibe sns., Fa raha tsy manana zavatra i Linux dia birao tena izy io, tsy milaza aho hoe ratsy ny LibreOffice, saingy kely dia kely , miaraka amin'ireo fitaovana marobe omen'ny MSOffice, ireo teboka rehetra fararanao ato amin'ity lahatsoratra ity dia tsy antony matanjaka (tsy hilazana antony miverimberina izay manandrana mampita ny vondrom-piarahamonina linux amin'ny hafa nefa tsy misy valiny) hiteny amin'ny olona iray, mifindra any LibreOffice , indrisy fa ity, ny fomba ilazana, ilay zavatra taloha ihany. Salama.
x-olona dia hoy izy:
Nandritra ny taona niasako tamin'ny solosaina dia nampiasa ireo mpamoaka lahatsoratra an-tsoratra roa aho (azo antoka fa mihoatra ny 90% izany) ... Niresaka ireo mpampanonta an-tsoratra tsotra aho, ... ary noho io antony io ihany noheveriko fa LO, Manome ahy izay ilaiko izy io, tsy azoko mihitsy hoe nahoana izy ireo no te hampitaha azy ireo, heveriko fa avy amin'ny lafiny iray na amin'ny lafiny iray ilay tena maniry hitrandraka ny fahafaha-manao azony an-tsakany sy an-davany, na ny iray na ny iray hafa, dia resaka fandalinana sy fianarana izany ihany. Ankoatra izany, izay te handoa zavatra azo atao maimaimpoana… tsara !!!! … Ho an'ny tsiro loko.
Mirary fahafinaretana betsaka !!!
Mamaly an'i x-man
Tsy nahalala ny fomba fampiasana azy hatramin'ny ela ny olona, ​​mpankafy fotsiny izahay.
Ohatra kely roa:
Ampio ny PDFimport ary azonao atao ny manitsy ny pdfs sy ny forme cover sns.
Ampio ny mpanova epub ary afaka mamorona epubs toy ny pdf ianao.
Oh, miasa amin'ny Libre sy OPenOffice izy ireo.
Tsy ho any amin'ny helo izany fa ny OpenOffice kosa no mitana ny tapany fahefatra, manana fahazoan-dàlana Apache, tsy miankina betsaka amin'i Java, ary mamela endrika hafa.
Na izany na tsy izany dia mahazatra ny addôna
Ah, ny addon hamoronana epub dia antsoina hoe Writer2epub ary ny PDFImport dia avy amin'ny Sun ary ankehitriny dia havaozina amin'ny Oracle, miankina amin'ny kinova an'ny Libre / Open Office izay ampiasainay, antsoina hoe Sun PDFImport (kinova 3) na Oracle PDFImport (Version 4) izany. Izy io dia ahafahanao manafatra PDF ary manavao azy ireo imbetsaka tianao.
Ity no lahatsoratra ratsy indrindra novakiako tamin'ity habaka ity. Toa zazalahy 10 taona no nanoratra izay vao mianatra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Zavatra vitsivitsy azo jerena:
1- Fifaneraserana ho an'ny mpampiasa tsara kokoa: Inona? Raha tiako ny ribbon, rehefa niova izy ireo tamin'ny birao 2003 ka hatramin'ny birao 2007 ny zavatra voalohany nataoko dia faly nanova an'io interface taloha io ary misaotra an'i microsoft tamin'ny nanaovany iray izay ahitako ireo singa mora foana.
2- Sorohinay ny tsy ara-dalàna (piraty): mampiasa birao 365 an-tsitrapo aho handoavana vola kely isam-bolana satria rindrambaiko lehibe io.
3- Mety tsara kokoa: Aha mazava ho azy ary izaho Bill Gates, birao Libre dia tsy niasa tsara noho ny Microsoft office, safidy maimaim-poana foana io, mahamenatra ohatra ny tabilao maimaimpoana.
4- Fanohanana ara-teknika tsara kokoa: raha fanohanana ara-teknika no tianao hambara dia ny vondrom-piarahamonina izay mangataka zavatra indraindray ary maniraka anao hanadala tsara ...
5 - Fahafahana manampy: Ao amin'ny Microsoft dia azonao atao ny manandramana ny beta, eny, rindrambaiko tompona sy izay rehetra tadiavinao izy io saingy io no izy.
6 - Tsy misy crapware: Ity no teboka ratsy indrindra novakiako, raha tsy hainao akory ny mametraka rindrambaiko amin'ny fomba amam-panao toy ny rindrambaiko hafa ka mametraka izay ilainao fotsiny ianao (miaraka amina fitaovana marobe manarona ny birao zavatra maro, fa raha tsy mila azy ireo ianao dia afaka mangataka ny tsy hametraka azy ireo) dia olona vaovao solosaina tonga lafatra ianao ary tsy mendrika ny hahatongavanao eto hanoratra lahatsoratra amin'ity bilaogy ity.
1- Resaka hevitra no resahina, izay no antony tsy hiadiako hevitra.
2- Maninona no mandoa zavatra anananao maimaim-poana. Ary, raha tsy ianao dia iray amin'ireo 3% izay tsy mahatratra azy ireo, na tsy fantatrao na tsy tianao ny hiova.
3- Tsara kokoa ny miasa, raha mampiasa ny endrika MSOffice mazava ho azy fa tsia dia andramo ireo endrika misokatra.
4 - Maniraka anao any amin'ny TPEC izy ireo rehefa te-hanova makro monstrous avy amin'ny MSO.
5 - Eto ianao dia misintona azy ireo isaky ny tianao.
6 - Manaiky aho.
Miresaka momba ny mpampiasa izahay fa tsy orinasa.
Tsy midika izany fa tsy afaka ny orinasa iray, midika izany fa raha manana macros 10 taona mahery ianao dia babo.
Atombohy hatramin'ny voalohany ary lazao ahy. Na aza manao programa amin'ny Excel, tsy fiteny fandefasana programa izany, fa mamatotra tena amin'ny fiankinan-doha.
Maninona no mandoa vola amin'ny fanananao maimaim-poana? Mora, noho ny serivisy hafa omen'ny birao 365, 1TB ao anaty rahona ahy, ny fahafaha-manana ny fisie ny rakitrao amin'ny fitaovana rehetra, mampiasa ny birao amin'ny ipad, dia ny tsy handoavako ny an'ny birao iray fotsiny
Ho an'i Oscar, fanontaniana adaladala, fantatrao ve hoe aiza no itahirizanao ny iPad, iPhone sns, ny antontan-taratasinao? Mora ny fanontaniana, lazao ahy fotsiny ny lahatahiry.
Raha fantatrao dia hangina aho, raha tsy fantatrao, apetraho amin'ny tambajotra ilay fanontaniana.
Fantatro ny toerana itahirizako ny ahy. Angamba tsy mifangaro amin'ny fomba manaitra toy izany aho, fa azo antoka amin'ny fomba manokana kokoa.
Raha hiditra amin'ny olana momba ny fiainana manokana ianao dia efa mikasika olana hafa izahay ary koa mikasika ny baolina, miresaka momba ny seha-birao iray ianao, vanim-potoana. Raha mandoa izany aho dia olako, tsy tiako ny birao maimaim-poana, tsy tiako izany, tsy nanampy ahy hiasa takelaka izany, ny fiasan'ny karazan-dahatsoratra izay iasako dia milay. Mijanona tanteraka, maninona raha manandrana mandresy lahatra olona hanao akanjo tsy tiany hampiasaina?
Tsy nisy nilaza taminao hanova, farafaharatsiny tsy izaho. Hitanao, toy ny Linux, ny mampiasa izay tianao.
Salama Azoko atao ve ny mametraka obuntu na birao maimaim-poana amin'ny solosaina findaiko, izay efa ampiasako win8.1?
Azonao atao, fa satria efa anananao izany, mangataha fanampiana. Mila azy ianao. Andao hojerentsika rehefa nividy zavatra ianao nefa tsy nisy ny OS efa napetraka.
ary azonao atao koa ny mametraka birao maimaimpoana amin'ny windows
Ny 20 taona niasako tamin'ny solosaina ary hitako nivoatra ny birao sy ny varavarankely.
Ary ny fampitahana ny fiara dia tsara, misy lesoka, manamboatra azy isika ary manamboatra azy, manohy mampiasa azy, tsy mivarotra azy ary manova azy hafa. Ary fantatro ny birao amin'ny kinova voalohany. Ny marketing sy ny toerana misy ireo orinasa ireo amin'ny haino aman-jery sy ny orinasa no zava-dehibe kokoa. Raha tsy maintsy nividy azy aho dia azoko antoka fa tsy hanao izany satria tsy mividy zavatra tsy mahomby aho.
arahaba avy any Arzantina
Mamaly an'i maximo
Tsara: tiako ny hilaza aloha fa mamaky ny bilaogy isan'andro aho ary tena tiako ireo lahatsoratra avoakanao. Fa tsy ekeko mihitsy io iray io. Fantaro fa nandao ny Windows ka hatramin'ny Linux aho 1 taona lasa izay ary tena tsara lavitra amin'ny Linux aho ary mampiasa ny safidy malalaka. Noho izany, tsy fikasako ny miaro ny biraon'ny MS amin'ny maha mpampiasa azy Windows. Amiko fotsiny dia tsy maintsy lazaina toy ny misy ny zavatra fa tsy manao fialan-tsiny hametraka ireo rindrambaiko tompona. Raha ny marina dia tsy ilaina ny fialan-tsiny. Fa tsy hiresaka momba ny tombony sy tombontsoa azo avy amin'ny rindrambaiko maimaimpoana aho izao, efa misy lahatsoratra tena tsara manerana ny internet. Mifandraika amin'ny anton'ny mpanoratra tsirairay:
1) Interface User Better: Tsy mitovy hevitra amiko. Ny fanovana ny interface interface dia tsy midika hoe ratsy na ratsy kokoa ilay vaovao. Windows 8, dia fiovana lehibe ary na dia maro aza no mankahala izany, dia nampiasaiko hatramin'ny nivoahany mandra-pahatongako tany Linux, ary tiako hamafisina fa tena nahomby izy io ary tsara kokoa ny nampitombo ny vokatra. Ary koa, ny hevitrao dia mety ho ratsy ny fantsom-pitaovana, ny ahy tsy, fa tsy misy fahamarinana tanteraka, mandeha ao aminy tsirairay avy izy io.
3) Miasa tsara kokoa: tsy manaiky aho. Samy miasa tanteraka ny birao misokatra sy ny birao maimaim-poana, fa ny maso ihany koa. Tokony ampiana fa io angamba no vokatra tsara indrindra an'ny Microsoft.
4) Microsoft, na dia tsy afaka aza, dia manana vondrom-piarahamonina somary lehibe ihany koa ary amin'ny Internet dia misy fampahalalana marobe hatrany momba ny Windows sy ny Office. Etsy ankilany, ny vokatra automatisation an'ny birao amin'ny ankapobeny dia nivoatra be ary tsy dia matetika loatra intsony izao ny mila famahana olana amin'izy ireo.
6) Tsy misy Crapware: Ity teboka ity dia miafara amin'ny fampisehoana amiko fa manoratra zavatra iray izay saika tsy fantatrao tanteraka ianao. Marina fa raha tsy mitandrina isika dia hametraka rindrambaiko fanampiny izay mety tsy hampiasantsika, fa mety hitranga amin'ny fonosana maro hafa koa izany. Raha ny marina, amin'ity tranga ity dia tsy malware izany. Ary manitrikitrika indray aho, ny biraon'ny MS no vokatra na karazana vokatra tsara indrindra an'io orinasa io, na dia tsy ekeko aza ny filozofia sy ny hetsika maro ao aminy.
Hofaranako amin'ny filazako fa tsy afaka manafika fahavalo ianao raha tsy fantatrao.
Ao amin'ny M. Office raha misy Crapware dia misy serivisy fiaviana mihazakazaka izay tsy ampiasainao toy ny mpanamarin-taratasy fahazoan-dàlana mandefa vaovao any amin'i Microsoft ary mety ho varavarana aoriana ihany koa izy ireo.
Holiwii dia hoy izy:
Raha misy zavatra tsy mahafinaritra dia ireo olona manoratra am-panesoesoana maimbo, toa an'izay nataon'i Gabriela González ao amin'ny Hypertextual, izay mianiana fa mahatsikaiky izy.
Momba ilay lahatsoratra, raha tianao ny hanome ny antonyo, tsara, saingy tsy ampiharina amin'ny 80% amin'ny fotoana izy ireo. tokony hanao lahatsoratra ianao hoe maninona TSY mampiasa libreoffice, satria tsy dia misy zavatra tsara koa
Valiny tamin'i Holiwii
ny felipe dia hoy izy:
Misaotra anao tamin'ny fanoratanao, nanampy ahy hanao asa tsy tiako eritreretina izany